Ka warran haddii kaartoon madaxa laguu geliyo si aadan u qishin imtixaanka?! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ka warran haddii kaartoon madaxa laguu geliyo si aadan u qishin imtixaanka?!
Ka warran haddii kaartoon madaxa laguu geliyo si aadan u qishin imtixaanka?!
India (Halqaran.com) – Mas’uul ka tirsan mas’uuliyinta machad ku yaal dalka India ayaa raalligelin bixiyay ka dib markii si weyn intarneedka lagu shaaciyay sawirrada ardayda machadkaasi oo kaartoomo madaxa loo geliyay si aysan imtixaanka u qishin.
Waxa uu sheegay in ay tijaabinayeen tallaabadaasi looga hortagayo qishka, ka dib markii ay ka war heleen in meelo kale laga isticmaalo.
“Marna ma jirin wax khasab ah. Sawirradaasi waxaa kaaga muuqanaya ardayda qaar oo kaartoon uusan madaxa ugu jirin,” ayuu yiri. “Ardayda qaarkood ayaa 15 daqiiqo ka dib iska bixiyay kaartoonkii madaxa ugu jiray, qaarkoodna 20 daqiiqo ka dib ayay iska tureen, saacad ka dibna innaga ayaaba ku amarnay in ay iska bixiyaan.”